“Gacalisadeyda ayey Iiraan u adeegsaneysaa gorgortan” | Berberanews.com
Home WARARKA “Gacalisadeyda ayey Iiraan u adeegsaneysaa gorgortan”
“Gacalisadeyda ayey Iiraan u adeegsaneysaa gorgortan”
Aras Amiri, oo ah gabar u dhalatay dalka Iiraan, heysatana daganaanshaha UK ayaa ku guul darreysatay racfaankii ugu dambeeyay ee ay ka qaadatay xukun xabsi 10 sano ah oo loogu riday eedeyn ku saabsaneyd inay meel uga dhacday ammaanka qaranka Iiraan, inkastoo ay arrintaas beenisay dhankeeda.
Haweeneydan oo u shaqeyneysay British Council ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2018-kii Iiraan u tagtay si ay u booqato ayeeyadeed oo aad waayeel u ah, halkaas oo lagu xiray.
Ninka ay u doonantahay, oo damacsanaa inuu guursado ayaa hadda sheegaya in dowladda Iiraan ay gacalisadiisa u adeegsaneyso “qaab gorgortan ah”.
James Tyson oo markii ugu horreysay arrintan uga hadlay wareysi uu siiyay BBC-da ayaa sheegay in dowladda UK looga baahnaa inay “telefoon kula hadasho” Iiraan ayna “u sheegto in waxaasoo kale aysan dhici karin”.
Waxa uu intaas ku daray in Ms Amiri lagu xiray isla xabsigii ay ku jirtay Nazanin Zaghari-Ratcliffe, oo ah hooyadii British-Iraan-ka ahayd ee loo xiray jaajuusnimada, isagoo sheegay in labada dumarka ah “ay aad isugu dhow yihiin, isuna taageeraan”.
Ms Amiri, oo 33 jir ah ayaa muddo 5 sano ah u shaqeyneysay British Council-ka, oo ah hay’ad ay dowladda Ingiriiska leedahay kana shaqeysa horumarinta dhaqanka iyo waxbarashada, waxayna ku nooleyd waddanka UK.
Waxay ka shaqeyneysay sidii gudaha UK horumar loogu gaarsiin lahaa dhaqanka Iiraan.
Mr Tyson ayaa sheegay in gacalisadiisa, oo sanadkiiba mar ama labo mar tagi jirtay Iiraan lagu qabtay waddada ay ugu socotay garoonka diyaaradaha, xilli ay isku dayeysay inay kasoo dhoofto waddankaas.
“Waxaa lagu sameeyay baaritaanno badan, waa la xiray, kaligeed ayaa meel lagu xiray, ka dibna waxaa lagu sameeyay baaritaanno socday in ka badan 2 bilood”, ayuu yiri.
Ms Amiri ayaa loo maxkamadeeyay dambi la xiriira “inay ku xad gudubtay amaanka qaranka Iiraan”, waaxda caddaaladda ee Iiraan ayaana sheegtay in Ms Amiri ay qiratay inay la shaqeyneysay sirdoonka Ingiriiska.
Mas’uuliyiinta British Council ayaa sheegay inay “aad uga soo horjeedaan eedeymaha loo jeediyay gabadhaas”
Xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Iiraan iyo UK ayaa bilihii dambe aad usii xumaanayay.
Previous articleCaarre oo ka jawaabay hadalkii Taliye Nuux
Next articleWax ka baro Somaliga keliya ee ka qaybgalay xorriyaddii Kenya